Ngaphantsi nguLady Gaga (kunye noBradley Cooper) - Izinto Zobugcisa
Le duet imangalisayo phakathi kukaLady Gaga kunye noBradley Cooper yarekhodwa kwi-2018 remake ye-movie yakudala Kuzalwa inkwenkwezi . UGaga udlala inkwenkwezi ekhulayo u-Ally, kunye no-Cooper imvumi esekwe uJackson Maine, oba ngumcebisi kunye nesithandwa sakhe. UGaga ucacisile ukuba le ngoma isebenza okomzuzu obalulekileyo kwifilimu. Uxelele uZane Lowe kumdlalo wakhe we-Beats 1 Radio: 'Ngabantu ababini abathetha bodwa malunga nesidingo kunye nokuqhubela phambili ungene nzulu kwaye uhlale kude nendawo engekho nzulu.'
U-Lady Gaga ubhale le ngoma kwiiyure ezine kunye nomvelisi wase-Bhritane-waseMelika u-Mark Ronson, owayekade engummangaliso u-Anthony Rossomando owayengummangaliso kunye nombhali wengoma u-Andrew Wyatt (Bruno Mars '') Xa ndandiyindoda yakho ').
URossomando, uAndrew Wyatt noRonson babekhe babhala kunye 'Umntu ondithandayo' kwi-albhamu yokugqibela ye-2010 Ingqokelela yeRekhodi .
Nangona esaziwa ngokuqhubela phambili pop, uGaga akaqhelananga neebhaladi, ebhale iingoma zothando ezinje 'ngeNtetho,' 'Mna nawe' kunye 'Nezigidi zeZizathu.'
Ividiyo yomculo yengoma ibonisa iziqwenga ezivela kwindawo yemovie apho uAlly noJackson Maine bacula ingoma kunye eqongeni okokuqala.
U-Lady Gaga kunye noMark Ronson babhale le ngoma kwangaxeshanye besenza icwecwe lakhe le-2016 UJoanne . Ngokukhawuleza nje ukuba yena noBradley bangene kwifilimu, yonke UJoanne I-albhamu yajika nje yaba Kuzalwa inkwenkwezi iiveki ezimbalwa, utshilo uRonson Ibhilibhodi .
Esi sibini ekuqaleni sayibhala njengengoma eyedwa ka-Ally, eyenzela uGaga ukuba ayicule, kwaye uRonson akazange ayithathe njengesibini. Ngokuqinisekileyo khange ndiqonde ukuba izakuba yinxalenye yesiqwenga, ibali kwindawo yokupaka, eyona ndawo intle kangaka, utshilo.
Oku kuphumelele imbasa yeGolden Globe yeNgoma eQhelekileyo yoqobo evela kumfanekiso oshukumayo. Yayiyimpumelelo yesibini yeGlobe yeGaga- waphumelela umdlali weqonga obalaseleyo kwiminiseries okanye kwifilimu kumabonakude ngokudlala iThe Countess / Elizabeth Johnson kwi Ibali laseMelika laseHoror: Ihotele kwiminyaka emithathu ngaphambili.
Isicwangciso sokuqala (isilumkiso somonakalisi!) Xa uJackson Maine esweleka ekupheleni kwe Kuzalwa inkwenkwezi Wayefanele ukuba arhaxwe. URonson utyhilele uHoward Stern ukuba isihloko sale ngoma siphefumlelwe sisiphelo sokuqala sefilimu.
Umbono wokuqala endandiwuvile wawucinga ukuba umfo kaBradley Cooper awudlalayo uza kutshona esiphelweni somdlalo bhanyabhanya, ke uza kuba yintoni? Amanzi amancinci? Ngaba ingcamango yokuba umntu othile utshonile? '
URonson wongeze ukuba le ngoma isuswe nyani xa uGaga eza 'Ndiphume esiphelweni, jonga njengoko nditsibela emgceni.
'Weza naloo mbono,' ndisemazantsi esiphelo, 'ndiyakhumbula ukuba wayehleli phantsi kwipiyano ... wabetha ngamatyathanga mhlawumbi ngamacandelo amabini emva koko wabetha into kwaye wenza,' Ndiphelile, kwaye uhlobo lweenwele lwenyuka ... oku kuya kwinto ethile. '
Oku kuphumelele imbasa yeGrammy yokuSebenza ngokuBalaseleyo kweQela lePop / iDuo kumsitho we-2019. Kwintetho yakhe yokwamkela, uGaga uthe, 'Ndinebhongo lokuba yinxalenye yemuvi ejongene nemicimbi yezempilo yengqondo. Babaluleke kakhulu kwaye uninzi lwabaculi bajongana naloo nto. Kufuneka sinyamekelane. '
Ingoma ikwaphumelele Ingoma ebalaseleyo ebhalelwe iMithombo yeendaba ebonakalayo, ibetha 'Zonke iinkwenkwezi' ukusuka I-Panther emnyama . Emva kwexesha kumsitho, uGaga wayenza kunye nabanye ababhali.
U-Anthony Rossomando wayesele emazi uLady Gaga ngaphambi kokuba abhalelwe ukubhala le ngoma, njengoko wayemfundisa izifundo zegitare.
Oku kuphumelele i-Oscar yeNgoma eQhelekileyo yoqobo, bebetha 'Zonke iinkwenkwezi' ukusuka I-Panther emnyama . Cooper kunye noGaga bayenza kumsitho.
'Akuncinci' kuye kwavela kwi # 21 ukuya kwi # 1 kwi-Hot 100 emva kokusebenza kwengoma yomculo kwii-Award Academy. Yayiyintsimbi yesine ka-Lady Gaga kunye neyokuqala ukusukela ' Ndizalwe ngale ndlela ngo-2011.
Ingoma ichithe iiveki ezingama-45 zizonke kwi-Hot 100, eyona yeyona ngoma ibalaseleyo ye-Oscar. Umnini werekhodi odlulileyo wayeyi-33 yeveki eshushu ye-100 yeengoma ezi-Frozen zikaIdina Menzel ' Yekela ihambe . '
Garth Brooks kunye noTrisha Yearwood kuqala wenza ingoma Ngokuthanda kwabo ngexesha lekhonsathi yabo kaFacebook Live ngo-Matshi 2020, emva koko kwi-CBS ekhethekileyo yokufumana udumo. Emva kokuba abalandeli bonwabile ngesigqubuthelo sabo, esi sibini sabaphatha ngokurekhodwa ngokusemthethweni ngo-Okthobha u-2020.
obhalele wena ingoma
Inombolo yeengelosi ezili-111 111
uziva nini kakuhle inc